हर्कको काँधमा धरानवासीले बिसाएको भरोसाको भारी « Canada Nepal
हर्कको काँधमा धरानवासीले बिसाएको भरोसाको भारी
काठमाडौँ– यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा हर्क साम्पाङ (राई) छाएका छन् । औपचारिक मतगणना र जित हारको घोषणा बाँकी हुँदैदेखि उनलाई बधाई दिनेको लस्कर थियो ।
दलका कोर कार्यकर्ता बाहेक धेरैजसो हर्कको जितमा हर्ष बढाई गरिरहेका देख्न सकिन्छ । मतगणना चल्दै गर्दा केहीबेर अग्रता र त्यसपछि तेस्रो स्थानमा धकेलिएका हर्क जब अघि बढ्न थाले उनलाई चिन्दै नचिनेका र उनको नाम सुन्दै नसुनेका पनि खुशी हुँदै उनलाई बधाइ दिन उछिनापाछिनमा लागे । कोही चाहिँ उनका पुराना भाषण र गीत सञ्जालतिर उधिनेर निकाल्दै आफू हर्कको फ्यान भएको बताउन थाले ।
रोचक कुरा त के हो भने २०७६ सालमा भएको उप निर्वाचनमा यिनै हर्कले मेयरमा जम्मा ४२२ मत मात्र पाएका थिए । अहिले अचानक जस्तो गरि धरानेले हर्कमाथि यति धेरै भरोसा कसरी गरे त ? धरानका पत्रकारहरूको मिल्दोजुल्दो भनाइ छ ‘आम मानिसका मुद्दा बोकेकाले ।’
धरानका बरिष्ठ पत्रकार हर्ष सुब्बा हर्कको जितका पछाडि मुख्य दुईवटा पक्ष देख्छन् । एउटा दलहरूले नै औसत उम्मेदवार मात्र उठाउनु र अर्को यसअघि पाएका मौकामा उनीहरूले राम्रो काम गर्न नसकेकाले आफ्ना मुद्दाहरु उठाइरहने हर्कले मौका पाए ती काम गर्लान् भन्ने मतदाताको भरोसा यसपटक मतपत्रमा पोखिएको उनको भनाइ छ ।
‘धरानको मूख्य मुद्दाका रुपमा रहेको खानेपानीको समस्या लामो समयदेखि उठाइरहेको र यसअघि निर्वाचनबाट वा सर्वदलीय संयन्त्र मार्फत मौका पाउँदा खासगरी एमाले र कांग्रेसले खानेपानीको समस्या समाधानका लागि गतिलो पहलकदमी नलिएका कारण यसपटक हर्कलाई हेरौँ न त भन्ने मनोविज्ञान देखिन्छ’ बरिष्ठ पत्रकार सुब्बाले क्यानडा नेपालसँग भने ।
२०७४ सालका स्थानीय तहको चुनावसम्म धरान एमालेको ‘लाल किल्ला’ नै थियो । सधैँजसो एमालेका उम्मेदवार विजयी हुने यो ‘लाहुरे नगर’का बासिन्दाले त्यसयताका दुई चुनावमा दुई फरक सन्देश दिएका छन् ।
तत्कालिन मेयर तारा सुब्बाको निधन पछि २०७६ साल मंसिर १४ गते भएको उपनिर्वाचनमा कांग्रेसका उम्मेदवार तिलक राई विजयी भए । उनलाई विजयी गराउँदा धरानका बासिन्दाले एमालेले आशा अनुसार गर्न नसकेको काम कांग्रेसले गर्ला कि भन्ने आशा मूख्य देखिन्थ्यो । तर, राईले आफ्नो कार्यकालमा त्यो आशा मेयर राईले पूरा गर्न नसकेपछि धरानले विकल्प खोजिरहेको थियो । त्यसअघि पनि सर्वदलीय संयन्त्रमार्फत नगर हाँकेको कांग्रेसले पनि खास काम गर्न सकेन । यी सबै कुराले दिक्क भएका धराने मतदाता विकल्पको खोजीमा थिए । अहिलेको चुनाबमा लौरोमा मतदान गरेर उनीहरूले त्यो भरोसाको भारी हर्कको काँधमा बिसाइदिएका छन् ।
धरानवासीको बर्षौँदेखिको र आम नागरिकको समस्या हो खानेपानी ।
उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित राईले पनि आशा अनुसार काम नगरेपछि यो चुनाबमा कसलाई मतदान गर्ने ? धरानेहरु सोचमा परे । पार्टीबाट जो उठेपनि मत दिन्छु भन्नेहरुको त कुरै भएन तर, स्वतन्त्र, युवा र पहिलोपटक मतदाता नामावलीमा नाम टिपाएका करिब २१ हजार मतदाताका लागि लागि आशालाग्दो विकल्प बनेर आए हर्क साम्पाङ । धरानका पत्रकार गोपाल दाहाल भन्छन् ‘बास्तवमा दलहरूले पटक पटक पाएको मौकामा काम गर्न नसकेपछि धराने मतदाता हर्कतिर लागेका हुन् ।’ उनको कुरालाई २ बर्ष अघि भएको उपनिर्वाचनको नतिजाले पनि पुष्टि गर्छ । जतिबेला यिनै हर्कले मेयरमा जम्मा ५४० मत पाएका थिए ।
हर्कले कुनै ठूलो काम गरेका वा सपना देखाएका छैनन । तर, उनले आम नागरिकका मुद्दा उठाउने, समस्या समाधानका लागि आफैँ लागिपर्ने र आम सरोकाकार विषयमा आवाज उठाइरहने उनको बानीले यसपटक धरानका मतदाताले उनलाई मौका दिने निर्णय गरेको देखिन्छ ।
आम मानिसका मुद्दामा सरोकार ब्यक्त गर्दागर्दै हर्क उनीहरुको भरोसाका पात्र पनि बनेका थिए । त्यसै हुनाले टोलमा ढल फुटे वा विजुलीको तार चुँडिएपनि कतिपयले पहिले नगरपालिका वा विद्युत प्राधिकरणलाई होइन हर्कलाई फोन गर्ने गरेका थिए । तत्कालै त्यहाँ पुग्ने उनी त्यहिँबाट सरोकारवालालाई फोन गरेर काम गर्ने प्रतिवद्धता खोज्थे ।
लामो समय धरानमा र अहिले नजिकैको इटहरीमा बसेर पत्रकारिता गरिरहेका विराट अनुपम पनि आम मानिसका यस्तै चासो र सरोकारका मुद्दामा लगातार ध्यान दिइरहेकाले उनको जित सम्भव भएको विश्लेषण गर्छन् ।
कहिले भानु चोकमा हाते माइक लिएर भ्रष्टाचार विरोधी नारा लगाइरहेका त कहिले ढल र सडक नबन्दा सडकमै अनसनमा बसिरहेका अनि कहिले खोला दोहन रोक्न सर्दु खोलाको बगरमा पुग्ने उनै हर्क साम्पाङ राई अहिले धरानवासीको भरोसा बन्न पुगेका हुन् ।
धरानमा खानेपानीको समस्या बर्षौँदेखिको हो । बढ्दो शहरीकरणसँगै काकाकुल बनेको धरानमा खानेपानीको समस्या समाधान गर्ने भनेर धेरैले चुनाव जिते । तर काम गरेनन् । केही परियोजना र खानेपानी संस्थानले नै पनि विभिन्न मोडालिटीबारे अध्ययन र प्रस्ताब गरे तर काम भएन । अहिले सप्तकोशीको पानी चतारा हुँदै धरानमा लैजाने परियोजना नै सबैभन्दा प्रभावकारी र दीगो हुने भन्ने निक्र्योलमा धेरै पुगेका छन् । यसका लागि खानेपानी संस्थानले अलि अगाडी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पनि तयार पारेको थियो ।
यसअघिका स्थानीय सरकारहरुले खानेपानीको ब्यवस्थापन गर्नका लागि मेयर प्रमुख रहनेगरि खानेपानी ब्यवस्थापन बोर्ड त बनाए । तर, आफ्नै आसेपासे, नातागोता र पार्टीका नेताका आफन्तलाई नियुक्त गरे ।
धरानधरानवासी पटकपटक पाएको मौका खेर फालेका कारण राजनीतिक दलसँग वाक्क दिक्क भएका थिए । त्यस्तोमा हर्क विकल्प बनेर आए । कसैले केही नगरेपछि केही गर्लान् कि भन्ने आशा मै धरानवासीले उनलाई मत दिएको भन्नेमा पत्रकारहरु सुब्बा र दाहाल मतैक्य छन् ।
आन्दोलन र अभियानका क्रममा यदाकदा उनी अलि अराजक हुन् कि भन्ने जस्तो पनि देखिन्थ्यो । तर समग्रमा कतै आन्दोलन गर्दै त कतै अनसन बस्न पुग्दै बर्षौँदेखि धरानका चोक र गल्ली चहारेका हर्क अब धरानको मेयरको कुर्सिमा पुग्ने भएका छन् । चुनाव चिन्ह लौरोमा मत हालेर धरानवासीले हर्कमाथि भरोसाको ठुलो पोको विसाएका छन् । काम भएन भनेर वा यसरी काम गर्नुपर्छ भनेर वाहवाही मात्र होइन मत समेत पाएर काम गर्ने ठाउँमा पुगेका हर्कले अब त्यो भरोसालाई कति न्याय गर्ने हुन् त्यसको छनक अबको केही हप्तामै देखिन थाल्नेछ ।
प्रकाशित मिति : जेठ ८, २०७९ आइतबार ६ : ०६ बजे